National Social Security Authority Archives - What's On In Harare
Home National Social Security Authority
Harare News 28 May 2021
Another warrant of arrest for Mupfumira
Source: Another warrant of arrest for Mupfumira | Herald (Africa) Prisca Mupfumira Nyore Madzianike–Senior Court Reporter FORMER Cabinet Minister Prisca Mupfumira was on Wednesday issued with another warrant of arrest after she failed to avail herself for trial in a matter in which she is jointly charged with ex-National Social Security Authority (NSSA) director contributions […]
The post Another warrant of arrest for Mupfumira appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 13 April 2021
Source: 100% payout hike, grocery vouchers for pensioners – NewsDay Zimbabwe BY PRAISEMORE SITHOLE PENSIONERS and widows are set to get a 100% increase to their monthly stipends, as well as grocery vouchers worth $3 000 from the National Social Security Authority (Nssa), NewsDay has learnt. Nssa deputy director for marketing Tendai Mutseyekwa told NewsDay that pensioners were going […]
The post 100% payout hike, grocery vouchers for pensioners appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 7 November 2020
Nssa investments pay $60 million dividends
Source: Nssa investments pay $60 million dividends – The Zimbabwe Independent THE National Social Security Authority (Nssa) received more than ZW$60 million (US$740 740) in dividends from companies it invested in during the first half of the year, according to acting general manager Arthur Manase. Manase told businessdigest this week that the focus for the […]
The post Nssa investments pay $60 million dividends appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …